Gary Neville oo shaaca ka qaaday hab yaab leh ee lagu joojin karo Cristiano Ronaldo – Gool FM
Arthur Melo oo si cad u sheegay xiddigii ugu adkaa uu wajahay xirfadiisa kubadda cagta
Manchester United oo dooneysa in Real Madrid ay ku garaacdo saxiixa xiddig muhiim ah
Gary Neville oo shaaca ka qaaday hab yaab leh ee lagu joojin karo Cristiano Ronaldo
Dajiye March 27, 2020
(England) 27 Mar 2020. Kabtankii hore kooxda kubadda cagta Manchester United ee Gary Neville isla markaana tababare ka soo noqday naadiga Valencia ayaa shaaca ka qaaday qaabkii uu u adeegsaday inuu ku joojiyo halista Cristiano Ronaldo, kulan horyaalka La Liga ay hadda kahor ku wada ciyaareen kooxaha Valencia iyo Real Madrid garoonka Mestalla.
Gary Neville ayaa tababare u soo noqday kooxda reer Spain ee Valencia mudo 4 bilood ah kahor inta aan laga ceyrinin, sababa la xiriira natiijo xumi ay kooxda la kulantay, laakiin iyadoo ay sidaas jirto wuxuu ku guuleystay in kulankii ay la ciyaareen Real Madrid ay ku kala baxaan bar-bardhac 2-2 ah.
Shabakada “Sky Sports” ayaa shaacisay wareyska uu bixiyay kabtankii hore kooxda kubadda cagta Manchester United ee Gary Neville waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Markii aan macalin u ahaa kooxda Valencia iyo habeenkii aan marti gelineynay Real Madrid ay joogeen Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale waxaan u adeegsaday taatiko ah in garoonka uu ka baxo cawska, taasoo aan ku doonayay inaan hoos u dhigo halista xiddiga reer Portugal”.
“Ronaldo ayaa ii yimid ka hor bilowgii ciyaarta wuxuuna igu yidhi (tani waa ceeb .. jar cawska), waxaan u sheegay maya ma sameyn doono, wuu awoodi waayay inuu ciyaaro habeenkaas”.
“Waxaan kaloo xasuusta ayaa waxay aheyd in Rafael Benítez uu ahaa macalinka kooxda Real Madrid, wuxuuna kulankaas ahaa kiisii ugu dambeeyay isaga, kahor inta aan shaqada laga cayrin”.
“Garoonku wuxuu u ekaa sida beertii oo kale, ma jirin hab uu Ronaldo noogu qalqal geliyo ciyaartan oo waxaan gaarnay wixii aan dooneynay ugu dambeyntii, waxay ahayd habeen runtii cajiib ah”.
Rivaldo oo kula taliyay Barcelona inay ka fogaato Lautaro Martínez, xilli uu tilmaamay xiddiga ay haboon tahay inay la soo wareegaan
PSG oo qorsheeneysa in qiimo ka xoogan kan Real Madrid ay ku soo qaadato xiddig ka tirsan kooxda…